Tue, Jul 14, 2020 at 5:43am
नयाँ दिल्ली, ८ असाेज । भारतकै सबैभन्दा ठूलो कार निर्माता कम्पनी मारुती सुजुकीले विभिन्न कारकाे मूल्य घटाएकाे छ । सुजुकीले चाडपर्व आउनै लाग्दा मूल्य घटाएको हाे। भारतीय सञ्चारमाध्यमका अनुसार बिक्री बढाउने योजनाअनुसार कम्पनीले ग्राहकलाई फाइदा हुने गरी कारको मूल्य घटाएको छ। कम्पनीका अनुसार मारुती सुजुकीले आफ्नो १० वटा चर्चित कारको शोरुम मूल्यमा ५ हजार भारुसम्म कम गर्ने निर्णय गरेको छ। यो सूचीमा मारुती सुजुकी..
कठमाडौं, ८ असोज । सार्क चम्बर महिला उद्यमी परिषद 'एससीडब्लुईसी' ले मंगलबार नयाँ नेतृत्व चयन गरेको छ । राजधानिमा आयोजित एक कार्यक्रमकाबीच एससीडब्लुईसीले नयाँ कार्य समिति चयन गरेके हो। उपाध्यक्ष सरोजनी शेरचनको नेतृत्वमा १० सदश्यि कार्यसमिती गठन भएको थियाे । उक्त समितीमा रेनु बज्राचार्य, अलिशाश्रेष्ठ, बसन्ती मिश्र प्रधान, हेमकुमारी अधिकारी, जुलिया चित्रकार, लुना श्रेष्ठ ठाकुर, निता पौडेल अधिकारी, सोनी जोशी र सुनिता..
काठमाडाैं ८ असाेज । चीनको स्मार्टफोन निर्माता कम्पनी हुवावेले केही दिनअघि मेट ३० सिरिजको स्मार्टफोन लञ्च गरेको थियो । हुवावे मेट ३० सिरिजका स्मार्टफोनले सामसुङ ग्यालेक्सी नोट १० लाई कडा टक्कर दिएको छ । तर, अमेरिका र चीनबीचको व्यापार युद्धका कारण मेट ३० सिरिजका डिभाइसमा गुगल एप्सको सपोर्ट प्राप्त हुनेछैन । हुवावेले नै तयार गरेको प्लाटफर्मममा मेट ३० सिरिजका स्मार्टफोन चलिरहेका छन्..
काठमाडाैं, ६ असोज डबल खुसीको अपग्रेड अफर अन्तर्गत चाडपर्वको अवसरमा एलजी नेपालले हरेक टेलिभिजनको खरिदमा छ महिनाको लागि प्रभु टिभी एप सित्तैमा प्रदान गर्ने भएको छ । यो सुविधा एलजीका पुराना खरिद गरिसकेका टेलेभिजनहरुमा पनि उपलब्ध गराइएको कम्पनीले जनाएको छ । सदस्यहरुको सदस्यता एलजी टिभीको प्रभु एपमा लगइन गरेपछि सुरु हुने कम्पनीले जनाएको छ । यो कार्ययोजना सुरु भएको तीन महिनाभित्र गर्नुपर्ने कम्पनीको..
काठमाडौँ, ३ असोज यसपालीको दशैंमा हुवावेले आफ्नो कम्पनीको फोन खरिद गर्दा विदेश भ्रमण अफर ल्याएको छ । भाग्यशाली बिजेताले ५ दिन इन्डोनेसियाको बाली र थाइल्यन्ड थाइलेन्ड घुम्न पाउनेछन् । उक्त अफरमा सहभागी हुन ग्राहकले आफुले किनेको हुवावे फोनको आइएमई नम्बर राखेर फेसबुक मार्फत एउटा फर्म भर्नुपर्ने हुन्छ । उक्त फर्म असोज १७ गते सम्म भर्न सकिनेछ ।..
काठमाडाैं, २ असाेज । नेपालमा ओप्पोको 'एनाइन २०२०' सार्वजनिक हुने भएकाे छ। यही असोज ६ गते 'एनाइन २०२०' नेपाली बजारमा सार्वजनिक हुने भएकाे हाे । त्यससगैँ अप्पोले नेपालमा 'एफाइभ २०२०' पनि सार्वजनिक गर्नेछ । एनाइनको मुल्य भने नेपाली बजारमा रु ३५ हजारको अनुमान लगाइएको छ । अपपो ए सिरिजका उक्त स्मार्टफोनहरु उत्कृष्ट फोटोग्राफी र डिजाइन सगैँ लामो समय टिक्ने ब्याट्री रहेको अप्पाको भनाई छ ।..
शेन्जेन, ३१ भदौ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले चिनियाँ प्रविधि कम्पनी हुवावेलाई अमेरिकी प्रविधि प्रयोग गर्न नदिने चेतावनी दिनुअघि नै सम्भावित खतरालाई विचार गरी हुवावेले प्रविधि अनुसन्धानका कार्यमा लगानी बढाएको छ । अमेरिकी प्रविधिसँगको निर्भरता तोड्ने उद्देश्य सहित हुवावेले गरिरहेको लगानीले अमेरिकी कम्पनीहरुलाई हुवावेसँगको सम्बन्धका बारेमा सोच्न बाध्य बनाएको छ । हुवावेका संस्थापकको भनाईमा कम्पनीले अनेक चुनौतीबीच आफ्ना उत्पादनलाई विश्व बजारमा स्थापित गराउन..
काठमाडौं, ३० भदौ । चिनियाँ ब्राण्डको स्मार्टफोन कम्पनी शाओमीले नेपालमा रेड्मी सिरिजका ७ वटा स्मार्टफोन ल्याएकाे छ । शाओमीका रेड्मी६, रेड्मी६ए, रेड्मी७ए, रेड्मी नोट६प्रो, रेड्मी नोट७, रेड्मी के२० र रेड्मी के२०प्रो नेपाली बजारमा उपलब्ध छन्। यी स्मार्टफोनमा आधुनिक डिजाइनका फिचर्स समावेश गरिएको कम्पनीले जानकारी दिएको छ। हेरौं यी फोनमा समावेश फिचर्स र मूल्य। रेड्मी६ डिस्प्लेः ५.४५ फुल स्क्रिन डिस्प्ले डुअल क्यामराः १२एमपी प्लस ५ एमपी एआई फेस अनलक प्रोसेरः १२एनएम..
काठमाडाैं, २९ भदाै । भर्खरै एप्पल आईफोन ११ सिरिज सार्वजनिक भएकाे छ । मंगलबार कम्पनीले अमेरिकामा रहेको आफ्नो मुख्यालयमा एक कार्यक्रमबीच तीनवटा स्मार्टफोन सार्वजनिक गरेको हो । यी तीन स्मार्टफोनलाई आईफोन ११, आईफोन ११ प्रो र आईफोन ११ प्रो म्याक्स नाम दिइएको छ । नयाँ आईफोनमा यसअघिको तुलनामा धेरै क्यामेरा रहेका कम्पनीले जनाएको छ । आईफोन ११ मा दुई ओटा क्यामेरा छन् । यसमा वाइड..
काठमाडाैं, २७ भदाै । इन्टरनेट सेवाप्रदायक कम्पनी भायनेट कम्युनिकेसन्सले दशै र तिहारलाई लक्षित गरी नयाँ अफर ल्याएकाे छ । भायनेटले आफ्नो ग्राहकहरुको लागि ‘भायनेट दशै तिहार टिभीको उपहार’ नामक नयाँ अफर ल्याएको हाे। यस अफरअन्तर्गत भायनेटका ग्राहकहरुले अतिरिक्त स्पिडको इन्टरनेट र २३० भन्दा बढी च्यानल भएको नेटटिभीको साथ स्काईवर्थको ३२ र ४० इन्च टिभी भारी छुटमा प्राप्त गर्न सक्ने कम्पनीले जनाएको छ। इन्टरनेट..
काठमाडौँ, २५ भदौ । प्रख्यात स्मार्टफोन निर्माता कम्पनी एप्पलले नयाँ आइफोन बजारमा ल्याएको छ । एप्पलको मुख्यालय क्यालिफोर्नियामा एप्पलका सिइओ टिम कुकले नयाँ फोन सार्वजनिक गरेका हुन् । कम्पनीले आइफोन ११, आइफोन ११ प्रो र ११ प्रो म्याक्स गरेर तीनवटा नयाँ फोन सार्वजनिक गरेको छ । नयाँ आइफोनका साथमा नयाँ आइओएस पनि सार्वजनिक गरिएको छ। आइओएस १३ र ए १३ बायोनिक प्रयोग गरेर..
काठमाडौं, १७ भदौ । सिभिल बैंक लिमिटेड र द हबि अटो ट्रेडिङबिच व्यवसायीक सहकार्य सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । उक्त सम्झौता पत्रमा बैंकका तर्फबाट नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुनिल कुमार पोखरेल तथा द हबि अटो ट्रेडिङका अध्यक्ष उमेश नारायण मानन्धरले हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो । उक्त सम्झौता अनुसार द हबि अटो ट्रेडिङबाट ट्याक्टर, कृषि औजार तथा हेभि इक्वीप्मेन्ट खरिद गर्न ग्राहकहरुलाई द..
काठमाडौँ, १५ भदौ आगामी सेप्टेम्बर १० मा एप्पलले आफ्ना तीनवटा नयाँ आइफोन सार्वजनिक गर्ने भएको छ जसका लागि एप्पलले औपचारिक रुपमा मिडियाहरुलाई निम्तो पठाएको छ । एप्पलले मिडियाहरुलाई पठाएको निमन्त्रणमा भनिएको छ, ‘कृपया आगामी सेप्टेम्बर १० तारेख बिहान १० बजे कुपर्टिनोस्थित स्टिभ जब्स थिएटरमा हुने विशेष कार्यक्रममा सहभागी हुनुहोला ।’ उक्त कार्यक्रममा एप्पलले तीनवटा नयाँ आइफोन सार्वजनिक गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।..
काठमाडौँ, १२ भदौ काठमाण्डौको भृकुटीमण्डपमा आयोजना गरिएको नाडा अटो सोमा म्याक लुब्रिकेन्टले आफ्ना तीन नयाँ उत्पादन सार्वजनिक गरेको छ । म्याक लुब्रिकेन्टले आफ्ना दुई नयाँ उत्पादन प्यासेन्जर भेकलस्का लागी र एक ग्रीज लन्च गरेको हो । नाडाले आयोजना गरेको अटो सो यहि भाद्र १० गते देखि १५ गते सम्म, बिहान १० बजे देखि काठमाण्डौको भृकुटीमण्डपमा ६ दिन सम्म चल्नेछ । आफ्नो वर्गको..
काठमाडाैं, १० भदाै । मंगलबारदेखि काठमाडौंमा शुरु भएको नाडा अटो शोमा निसान गाडीले 'फेस्टिभ ड्राइभ' उपहार योजना ल्याएको छ। निसान फेस्टिभ ड्राइभ योजना अन्तर्गत नाडा अटो शोमा आएका ग्राहकले गाडी बुकिङ गरेवापत ३१,९९९ बराबरको एमआइ ८ लाइट मोबाइल निःशुल्क पाउने छन्। गाडीका खरिदकर्ताहरु बीच गरिने लक्की ड्रमा छानिएका १० जोडीले मलेशिया भ्रमण गर्ने अवसर पाउने छन् भने ५ जनाले १० ग्रामको सुनको..
काठमाडौं, १० भदाै । मंगलबारबाट राजधानीमा बृहत् नाडा अटो सो शुरू भएकाे छ । प्रत्येक वर्ष दसैँतिहारलाई नै लक्षित गर्दै अटोमोबाइल सम्बद्ध संस्था नाडा अटोमोबाइल एसोसियसन अफ नेपालले अटो सोको आयोजना गर्दै आइरहेको छ । यस वर्ष पनि नाडाले सोही मौसम पारेर मेलाको आयोजना गरेको हो । अटो सोलाई अटो मोबाइल्स क्षेत्रकै कुम्भ मेलाको रूपमा चित्रण गर्ने गरिन्छ । त्यसो त नेपालमा उपलब्ध सबै..
काठमाडौं, ९ भदौ । यामाहा एमटी१५, ‘द डार्क वारियर’ औपचारिक रुपमा नेपालमा सार्वजनिक भएकाे छ । नेपालका लागि यामाहा मोटरसाइकल तथा स्कुटरको आधिकारिक विक्रेता एमएडब्लु इन्टरप्राइजेजले यामाहा एमटी१५, ‘द डार्क वारियर’लाई औपचारिक रुपमा नेपालमा सार्वजनिक गरेको हाे । नयाँ एमटी१५ मा लिक्विड कुल्ड, ४ स्ट्रोक, एसओएचसी, ४ भल्भ, ६ स्पिड ट्रान्समिसन भएको १५५ सीसीको फ्युल इन्जेक्टेड इन्जिन छ जसमा ‘भेरिएबल भल्भ एक्च्युएसन’..
काठमाडौं, ९ भदाै । लायन्स क्लब अफ काठमाडौं, लायन्स क्लब अफ काठमाडौं– नर्भिक तथा लियो क्लब अफ काठमाडौं मिनभवनको संयुक्त आयोजनामा नयाँ समितिको पदस्थापन समारोह सम्पन्न भएकाे छ । कार्यक्रममा पदस्थापन समारोहका साथै नवप्रवेशी लायन सदस्यहरूलाई स्वागत पनि गरिएकाे हाे । सन् २०१९–२०का लागि चयन भएको लायन्स क्लब अफ काठमाडौंका प्रेसिडेन्ट जेएन पोखरेल, लायन्स क्लब नर्भिकका प्रेसिडेण्ट श्रीपा श्रेष्ठ तथा लियो क्लब..
अब नेपालमा पनि टाटा एच फाइभ, बुकिङ खुल्याे
काठमाडाैं, ६ भदाै । नेपाली बजारमा टाटा मोटर्सको प्रिमियम एसयूभीटाटा एच फाइभको बुकिङ खुला भएकाे छ। नेपालका लागि टाटा मोर्टसको एकमात्र आधिकारिक वितरक सिप्रदी ट्रेडिङ प्रालीका अनुसार यही भदौ १० गतेबाट १५ गतेसम्म भृकुटीमण्डपस्थित प्रदर्शनीस्थलमा आयोजना हुने १४ औं संस्करणको नाडा अटो शो २०१९ मा टाटा एच फाइभ पहिलो पटक नेपाली बजारमा सार्वजनिक हुँदैछ । भारतमा टाटा ह्यारियर पनि भनेर चिनिने टाटा..
नेपालमा भाेलि सार्वजनिक हुँदै हुण्डईकाे भेन्यु कार, कति पर्छ मूल्य ?
काठमाडाैं, ४ भदाै । भारतीय बजारमा छोटो समयमै सर्वाधिक चर्चा बटुलेको हुन्डाईको नयाँ भेन्यु कार नेपालमा सार्वजनिक हुने भएकाे छ । नेपाली बजारमा हुन्डाईको नयाँ भेन्यु कार बिहिबार सार्वजनिक हुन लागेकाे हाे । उक्त कार नेपालको आधिकारिक बिक्रेता लक्ष्मी इन्टर कन्टिनेन्टलले बजारमा सार्वजनिक गर्न लागेको हो। भारतमा गत मे २१ मा सार्वजनिक गरिएको यो कार छोटो अवधिमै ४५ हजारभन्दा बढी युनिट बुकिङ भइसकेको छ।..
सामाजिक सेवामा जनता बैंक : जनभोजनका लागि रु. २ लाख सहयोग !
काठमाडौं, ४ भदौ । प्रेमसागर फाउण्डेसन नेपालले संचालन गरेको जनभोजनका लागि जनता बैंकले रु. २ लाख सहयोग हस्तान्तरण गरेको छ । जनभोजन कार्यक्रमको कार्यालय रहेको तसर्पु, दामेचौर, धादिङमा एक कार्यक्रमकाबीच बैंकको तर्फबाट प्रेमसागर फाउण्डेसनका उपाध्यक्ष डा. प्रेमराज ढुङ्गेललाई रकम हस्तान्तरण गरिएको बैंकले जनाएको छ । प्रेमसागर फाउण्डेसनले संचालन गरेको जनभोजन कार्यक्रमले दैनिक ५ सय बालबालिका र करिब १ सय जना बृद्ध आमाबुबाहरुलाई..
नेपाली बजारमा आउँदै 'यामाहा एमटी १५' यस्ता छन् फिचर्स
काठमाडाैं, ३ भदाै । नेपाली बजारमा यामाहा एमटी १५ सार्वजनिक हुने भएको छ। भारतमा केही महिना अघि नै सार्वजनिक भएकाे यामाहा एमटी १५ अब नेपाली बजारमा सार्वजनिक हुन लागेकाे हाे । यामाहा एमटी १५, एमटी सिरिजको सबैभन्दा कान्छो र यामाहा आर १५ भी३ को ‘नेकेड स्ट्रिट फाइटर भर्सन’हो। १५५ सीसीको सिंगल सिलिन्डर, लिक्विड कुल्ड इन्जिन जडान गरिएको यामाहा एमटी१५ ले १० हजार आरपीएममा १९.३ एचपी पावर..
कुमारी जबकाे पहिलाे शाखा बुटवलकाे पुरानाे बसपार्कमा
बुटवल, १ भदौ । कुमारी जब प्रालिले शाखा बुटवलमा स्थापना भएकाे छ । बिगत ५ बर्षदेखि काठमाण्डौंको तिनकुनेमा सेवा दिँदै आएको कुमारी जबले शाखा विस्तारका क्रममा आफ्नाे पहिलो शाखा बुटवलमा विस्तार गरेको हाे। कुमारी जबले लामाे समयदेखि विभिन्न रोजगारदाता कम्पनीहरुलाई कर्मचारी सप्लाई गर्दै आएको छ । यस सेवालाई विस्तार गर्न कु्मारी जबले राजधानी बाहिर आफ्नाे पहिलो शाखा सञ्चालन गरेकाे हाे । आइतबार एक कार्यक्रमका बीच प्रदेश नं ५ का प्रदेशसभा सदस्य बिष्णु..
काठमाडौं, ३१ श्रावण । निजी कम्पनी तथा सरकारी, अर्ध–सरकारी र गैर–सरकारी संस्थाका लागि समस्याको पहिचानका साथै नवप्रबर्तन (इनोभेसन) मा आधारित समाधानको खोजी गर्न विश्वस्तरमा प्रख्यात डेमोला ग्लोबल काठमाडौंस्थित किंङ्गस् कलेजसँगको साझेदारीमा नेपालमा प्रवेश गरेको छ । काठमाडांैमा बुधबार आयोजित एक समारोहबिच उक्त सम्झौताको घोषणा भएको हो । हालसम्म विश्वको १६ वटा राष्ट्रहरुमा सञ्जाल निर्माण गरिसकेको डेमोलाले विभिन्न निजी कम्पनी एवं सरकारी, अर्ध–सरकारी तथा..
यी हुन् 'नाडा अटो शो'मा सार्वजनिक हुने शक्तिशाली मोटरसाइकलहरु [मूल्यसहित]
काठमाडौं, ३० साउन । भदौ १० गतेदेखि काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा नाडा अटो शो २०१९ हुने भएकाे छ । हुँदैछ। नेपालमा सवारी बिक्रेता कम्पनीहरुले नाडा अटो शोलाई लक्षित गरेर नयाँ-नयाँ उत्पादन सार्वजनिक गर्दै आएका छन्। अटो शो दसैं आउनु केही समयअघि हुने भएकाले पनि नयाँ मोडलहरु सार्वजनिक गर्न कम्पनीहरुबीच प्रतिस्पर्धा नै हुने गरेको छ। उपभोक्ताको चाहना उपलब्ध भएसम्म नयाँ मोडल खरिद गर्ने नै हुने गरेको..
ऐन विपरीत काम गरेकाले एशियन पेन्टस् उद्योगमाथि मुद्दा दायर
हेटौँडा, ३० साउन । नापतौल ऐन र कानूनविपरीत काम गरेको आरोपमा हेटौँडा औद्योगिक क्षेत्रमा रहेको एशियन पेन्टस् उद्योगमाथि जिल्ला अदालत हेटौँडामा बिहिबार मुद्दा दायर गरिएको छ । नापतौल ऐन २०२५ को विपरीत काम गरेकाले गुणस्तर तथा नापतौल क्षेत्रीय कार्यालय वीरगञ्जले सो उद्योगमाथि मुद्दा दायर गरेको हो । उद्योगले नापतौल यन्त्रको खरीद गरी सञ्चालन गरेको ३५ दिनभित्र नापतौल कार्यालयबाट इजाजतपत्र लिनुपर्ने प्रावधान रहेको तर,..
युवाहरुको लागि सम्भावनाका ढोका खोल्दै – नसकिने के छ ?
काठमाडाैं, ३० साउन । लायन्स र लियो क्लब अफ काठमाण्डौं 'अल्का'ले विगत केही समयदेखि समाजमा केही परिवर्तन र युवाको विकासको लागि कामहरू गर्दै आएकाे छ। जस अन्तर्गत लियो विनायक घिमिरेको नेतृत्वमा हालसालै “नसकिने के छ ?” भन्ने एक मोटिभेसनल कार्यक्रमको सुरुवात भएको छ । कार्यक्रमको लागि लियो क्लब अफ काठमाण्डौंले कृत्य हव प्रालिलाई मिडिया पार्टनर र रेन्बो रेष्ट्रोलाई भेन्यू पार्टनरको रुपमा लिएको छ..
३५०० एमएएच ब्याट्री क्षमता भएको सामसङ नोट टेनको बुकिङ खुल्यो, कति पर्छ मूल्य ?
काठमाडाैं, २९ साउन । दक्षिण कोरियाली स्मार्टफोन निर्माता सामसङकाे नाेट टेनको बुकिङ खुलेकाे छ । सामसङले आफ्नो नोट फ्ल्यागसिपमा नयाँ मोडल ल्याएसँगै विश्वबजारमा एकैपटक अगष्ट २३ देखि उपलब्ध हुने नोट टेनको बुकिङ नेपालमा पनि खुलेको हाे। सामसङले नेपालबाटै बुकिङ गर्न सकिने जानकारी दिएको छ। कम्पनीका अनुसार अनलाइन तथा सामसङको स्टोरबाट फोनको बुकिङ गर्न सकिने छ। नोट टेन र टेन प्लस गरी दुई भेरियन्टका स्मार्टफोन खरिद..
सिभिल बैंकको नयाँ शाखा अब सुनसरीको दुहवीमा
काठमाडाैं, २८ साउन । सिभिल बैंकले आफ्नाे शाखा विस्तार गर्ने क्रममा सुनसरी जिल्लाको दुहवीमा शाखा संचालनमा ल्याएको छ ।'समृद्धिको लागिसिभिल बैंक' भन्ने नाराका साथ अगाडी बढेको सिभिल बैंकले सुनसरी जिल्लाको दुहवीमाशाखा संचालनमा ल्याएको हाे । सो शाखाको उद्घाटन दुहवी नगरपालिकाका नगरप्रमुख बेद नारायण गच्छदारले गरे। उक्त शाखाको उद्घाटन समारोहमा प्रमुख अतिथि तथा अन्य विशिष्ट पदाधिकारीहरु, सिभिल बैंकका क्षेत्र नं १ का क्षेत्रिय प्रबन्धक सन्तोष कुमार..
एलजी तीन वटा स्क्रिन भएकाे स्मार्ट फाेन ल्याउँदै, यस्ता छन् विशेषता
काठमाडौं, २४ साउन । स्मार्टफोन निर्माता एलजीले अब तीन वटा स्क्रिन भएकाे स्मार्ट फाेन ल्याउने भएकाे छ ।एलजीले आफ्नो नयाँ डिभाइस अन्तर्गत तीनओटा स्क्रिन भएकाे फाेन सार्वजनिक गर्ने भएकाे हाे । आईएफए २०१९ को पत्रकार सम्मेलनको लागि सार्वजनिक गरिएको टिजरमा एक झल्को दिइएको हो । २० सेकेण्डको टिजरमा एक एनिमेटेड सिंगल स्क्रिनमा भिडियो गेम चलिरहेको छ र यसमा सानो गेम कन्ट्रोलर र क्यामेरा आइकोन..
Results 270: You are at page2of 9